အသားဖြူအောင် ရှားစောင်းလက်ပတ်ကို သုံးပြီး…ပြုလုပ်နည်း - ရပ်ကွက်
ဓါတုပစ္စည်းတွေကို သုံးပြီး အ သားဖြူအောင် လုပ်မှာ ထက်စာရင်တော့ သဘာဝနည်းကို သုံးပြီးကြိုးစားကြ ည့်တာက ပိုပြီးတော့ အန္တရာယ်ကင်းပါတယ် …. ။ ။ အသုံးပြုရမယ့် ပစ္စည်း ကလည်း တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ရှားစောင်းလက်ပတ်ပါ။ ရှားစောင်းလက် ပတ်ကို အသား ဖြူဖို့အတွက် ဘယ်လို မျိုး အသုံးပြုရမလဲဆိုတော့…..
(၁)ရှားစောင်းလက်ပတ်တစ်မျိုးတည်းကို သုံးပြီး ဖြူအောင် လုပ်နည်း
ရှားစောင်းလက်ပတ်ကို နှစ်ခြမ်းခွဲပါ။ပြီးရင် ဂျဲလ်ကို ထုတ်ပြီး ဇွန်း(သို့) ခရင်းနဲ့ ခြစ်ထုတ်ပါ …. ။ ပြီးရင်တော့ မျက်နှာမှာ လူးပေးပြီး(၁၀)မိနစ်ကြာအောင် ထားပေး ပါ။(၁၀)မိနစ်လောက် ပြည့်ရင်တော့ ရေအေးနဲ့ဆေးချပါ …. ။ ဒီနည်းကို တစ်ရက်မှာ နှစ်ကြိမ်လောက်၊အချိန်မရဘူးဆိုရင်လည်း အနည်းဆုံး တစ်ပတ်မှာ ငါးကြိမ်ေ လာက်တော့ လုပ်ပေးပါ။
ရှားစောင်းလက်ပတ်ဂျဲလ်၊နနွင်းနဲ့ပျားရည်တို့ကို ပျစ်နေအောင် ရောပါ။ပျစ်နေေ အာင် ရောနယ်ပြီး လိမ်းပေးပါ …. ။ မိနစ်(၂၀)လောက် ထားပြီး ရေကြက်သီးနွေးနဲ့ ဆေးချပါ။ဒီနည်းကိုတော့ တစ်ပတ်မှာ နှစ်ကြိမ်၊သုံးကြိမ်လောက် လုပ်ပေးပါ။
ရှားစောင်းလက်ပတ်ထဲက ဂျဲလ်ကို ခြစ်ယူပါ။ပြီးရင်တော့ သံပရို သီး(၂)လုံးကို အရည်ညှစ်ပြီး၊ရောပါ …. ။ သေချာနှံ့အောင်နယ်ပြီး (၁၅)မိနစ်လောက် ကြာအောင် လိမ်းပေးပါ။ပြီးရင်တော့ ရေနဲ့ဆေးချပါ။နေ့စဉ်ပုံမှန် ပြုလုပ်ပေးပါ …. ။
သခွားသီးကလည်း အသားအရေကို တောက်ပစေသလို ရှားစောင်းလက်ပတ် ကလည်း အသားအရေကို ရေဓါတ်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပါတယ် …. ။ ရောကြိတ်ပြီး လိမ်းပေးပါ။သခွားသီးမဟုတ်ပဲ ဒိန်ချဉ်နဲ့ရှားစောင်းလက်ပတ်ဂျဲလ်ကို ရောလိမ်း လို့လည်း ရပါတယ်။ နာရီဝက်လောက် လိမ်းထားပေးပြီးရင်တော့ ရေအေးနဲ့ ဆေးချပေးပါ။တစ်ပတ်မှာ နှစ်ကြိမ်၊သုံးကြိမ်လောက် လုပ်ပေးပါ။
ရှားစောင်းလက်ပတ်ဂျဲလ်နဲ့ဗီတာမင်အီးတို့ကို ရောလိမ်းပေးရမှာပါ။ရှားစောင်း လက်ပတ် ဂျဲလ်လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း၊ ဗီတာမင်အီး ဇွန်းဝက်ကို ရောပြီး လိမ်းပေးပါ …. ။ မိနစ်(၃၀)လောက်ကြာရင်တော့ ရေနဲ့ဆေးချပါ။တစ်ပတ်မှာ တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ပေးပါ။
Credit : homeremedies